Fivahinianana tao amin'ny Toby Lehibe Soatanana (16 - 18 Oktobra 2021) - SAFIF - FJKM Tranovato Ambatonakanga
Sabotsy hariva tamin’ny 7 ora no nigadona tao amin’ny toby Soatanana izahay ary nampandrosoin’i Mama Julienne Raiamandrenin’ny toby tao amin’ny trano fandraisam-bahiny: natombony tamin’ny vavaka fisaorana an’Andriamanitra – nohiraina ny hira “misaora an’I Zanahary”, mbola notohizany vavaka, vao roso tamin’ny dinidinika sy ny tafatafa mahakasika ny dianay. Nofaranana tamin’ny hira “arovy aho Tompo”.
Nandamindamina entana izahay, dia notarihina sahady tamin’ny trano fihaonana, efitrano malalaka misy seza lava ny lafin-drindrina 3 sy ny teo afovoan’ny efitrano: ny lehilahy nitokana, ny vehivavy nitokana, izahay vahiny nitokana . Ny lehilahy nanao malabary sy pataloha fotsy ary lamba be fotsy koa, ny vehivavy akanjo didy mananjara lava tanana sy lamba fitafy fotsy. Tao amin’ny antsasaky ny efitrano kosa ireo zanaky ny fifohazana mpihira.
Nisy ny nivavaka, narahin’ny hira FFPM 2 avy eo ary notohizana tamin’ny vavaka indray, notarihina teny amin’ny trano eva, toerana voatokana ho an’ny fanasan-tongotra izahay, misy dabilio sy fametrahan-tongotra. Notronin’ny tompo-tanàna tamin’ny hira hatrany izany (hira zafindraony): olona iray manondraka amin’ny rano (matimaty), ny iray mikosoka ny tongotra ary manaraka avy eo ny mpamafa amin’ny lamba fotsy, nitety anay efa niatrana teo amin’ny dabilio.
Nanala kapa avokoa ireo nanana anjara tamin’izao fanasan-tongotra izao, tsisy miteny na dia lany aza ny rano nanondrahana anay.
Notononina ho anay ny fiadanan’ny Tompo vao nitsangana ny vahiny. Notarihina hiverina ao amin’ny efitra nivavahana teo izahay. Rehefa nahazo toerana izahay dia indreo ny vehivavy nitandahatra ary nipetraka nitorovoka tsy dia lavitra anay. Nataony tanan-dava ny horonantsihy novelariny manoloana anay. Dia toy izany koa ny lambanana, vary feno lovia, laoka anaty vilia jobo, kaopy sy kafitera misy ranovola. Natao ny vavaka ary nisakafo izahay. Hay ireto vehivavy manoloana anay no mpandroso sy manampy ny ranonay. Vita ny sakafo, natao tanan-dava koa ny nanala ny fitaovana rehetra. Indreo indray nisy nitondra koveta sy rano hanasan-tanana sy lamba famoahana.
Tanaty hira hatrany no nisakafoanany teo, vatsin’ny nofo izany. Natsahatra ny hira; Nijoro lehilahy iray nitondra ny vatsim-panahy ho anay: jaona 13: 1 – 14 izay nanambarany hevi-dehibe telo:
Jesoa manao asa fanompoana amintsika
Isika koa tokony hanao asa fanompoana amintsika samy isika
Manana anjara avy amin’i Jesoa isika
Vavaka – hira 338 dia naterina an-kira teny amin’ny trano handrianay izahay, nifanao veloma samy ho tsara mandry vao nisaraka.
Alahady maraina nanatrika ny fanompoam-pivavahana tao amin’ny fiangonana loterana Soatanana, nitokam-bavaka tao amin’ny trano firaiketana, nisy ny niverina ny tolak’andro namonjy ny fiangonan-kariva ary tao ny nanomana ny fandaharam-potoana ny ampitso.
Alatsinainy maraina, tamin’ny 7 ora, niainga ho eny amin’ny tendrombohitra Fiadanana hitokam-bavaka izahay. Miato in-telo rehefa mandeha eny hoy Dada 10 aogositra, voalohany vavaka fanairana, faharoa vavaka fanampahan-kevitra ary ny fahatelo vavaka fibebahana.
Tonga soa aman-tsara teo an-tendrombohitra izahay ary nanao fampianarana i Dada 10 aogositra ny amin’ny fitokanam-bavaka:
Jesoa nifady hanina sy nitokam-bavaka 40 andro sy 40 alina: mila fitokanam-bavaka ho anao samirery koa isika ahazoana mandresy ny fakam-panahy. (mat 4: 1 – 3)
Jesoa tao an-tendrombohitra (mat17: 1 – 2): ny olona miaina am-bavaka sy mitokam-bavaka dia isehoan’ny voninahitr’Andriamanitra
Jesoa tao Getsemane (mat 26: 36 – 46): nitokam-bavaka niaraka tamin’ny mpianany izy mialoha ny hitondram-bavaka ny hazo fijaliana. Ny kristiana mitokam-bavaka dia mahazaka ny hazo fijaliany, manana tsiambaratelo ao amin’ny Andriamanitra ny olona mitokam-bavaka, manana ny fandaharana tian’Andriamanitra atao amin’ny fiainantsika Izy fa tsy isika no manao izany Aminy.
Hafatra: ny zavatra lazain’i Jesoa ihany ny henoy, mila mino sy matoky ny tenin’Andriamanitra isika fa mahery ny feony. Nihovitrovitra ny tendrombohitra Sinay raha niteny Andriamanitra. Eto amin’ny matio 26, lavon’ny torimaso ny mpianatra, Jesoa ihany no fananganana antsika amin’ny maty. Aza mijery olona fa Jesoa ihany.
Rehafa vita izany fampianarana izany dia nitokam-bavaka tsiroaroa izahay.
Atoandro efa ho any amin’ny 11 ora tany no niala teo hamonjy an’i Ambalavato. Faribohitra Ambatoreny, fa teto Ambalavato i Dada Rainisoalambo no nibebaka sy nanorim-ponenana. Anendaka no toerana nonenan’ny ray aman-dreniny izay mpanompo sampy, ka rehefa maty rainy dia noraisin-dRainisoalambo ny odiny. Tian’Andriamanitra izy satria narary. Feno hidihidy ny tenany manontolo nefa tsy sitran’ny odiny. Andriamanitra no niteny taminy hanary ny odiny, fa “te-hamonjy ny oloko Aho “ hoy Andriamanitra.
Fototra nipoiran’ny Fifohazana Ambatoreny.
Toy ny fandraisam-bahiny tao Soatanana ihany koa no teto Ambalavato: vavaka, hira, fanasan-tongotra, fitokanam-bavaka tao amin’ny efitrano izay voalaza fa nilatsahan’ny Fanahy Masina tamin’i Dada Rainisoalambo, fisakafoanana ary vatsim-panahy.(1Kor13:13)
Tamin’ny 3 ora sy sasany vao tafainga tao Ambalavato izahay hody any Soatanana.
Ny Talata maraina tamin’ny 4 ora no nandao an’i Soatanana izahay.
Eto am-pamaranana, dia izao no tsapanay:
Olon’ny vavaka i Soatanana ary mazoto sy mana-talenta amin’ny hira zafindraony, nampitombo anay ny fivahinianana tao amin’ny Toby lehibe Soatanana:
Ara-panahy tamin’ny fampianarana sy ny toriteny ary ny fitokanam-bavaka natao tany
Nahafantaranay misimisy kokoa ny tantara sy ny fomba amam-panaon’ny fifohazana, entinay hanatsarana ny asa fanompoana izay efa nifidianan’ny Tompo anay.
Voninahitra ho an’ANDRIAMANITRA RAY SY ZANAKA ARY FANAHY MASINA.
Ambatonakanga, Fifohazana. permalink.